MWC 2021 no hotanana, fa mifandimby mifanalavitra amin'ny mifanatrika | Androidsis
Hisy ve ny MWC 2021? Toa izany, fa misy fetrany
Rehefa nanapa-kevitra ny GSMA nofoo ny Kongresy Iraisam-pirenena Finday 2020, maro no nitaraina tany an-danitra. Tsy azon'ny gazety ny antony nitohizan'ny hetsika hafa, raha ny foibe finday lehibe indrindra eran-tany no hetsika lehibe voalohany nofoanana noho ny hafaliana Coronavirus.
Ankehitriny, nanjary mazava fa, na dia nisy fiatraikany mazava teo amin'ny indostria sy ireo orinasa tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana azy aza io fepetra io, dia nahomby kokoa noho izany. Fa inona no hitranga amin'ny MWC 2021? Izahay dia mitondra vaovao tsara sy ratsy.
MWC 2021 no hatao, saingy vitsy ny mpiasa
Bloomberg no nanamafy fa GSMA dia miasa amin'ny andiany manaraka amin'ny Mobile World Congress, izay hatao amin'ny faran'ny volana febroary na ny fiandohan'ny volana martsa. Saingy, ho lasa hybrid izay hanambatra ny mifanatrika amin'ny lavitra. Antony lehibe mahatonga ny orinasa hametraka ny 20 isan-jaton'ny mpiasa ao aminy.
Ny Mobile World Congress dia maneho ny 80 isan-jaton'ny Vola GSMA fidiram-bola isan-taona, izay nanamafisan'i Stephanie Lynch-Habib Lehiben'ny Marketing an'ny orinasa fa ny ampahadimin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa, izay manana mpiasa sahabo ho 1.000, dia horoahina.
Ary ny antony dia fanapahana vola fotsiny izay tsy jeren'izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy, satria manombana izy ireo fa hisy ny tranga fanarenana «telo taona farafaharatsiny«. Araka ny nambaran'i Stephanie, tena henjana ny toe-draharaha, ary ilaina ireo dingana ireo mba hanohizan'ny GSMA ny asany.
Na izany na tsy izany, na dia nanamafy aza izy ireo fa hisy ny MWC 2021, ny andiany manaraka dia ho lasa hybrid izay hisongadina ny famelabelaran-kevitra lavitra sy ny fetra amin'ny isan'ny mpampiasa ao amin'ny foara. Araka ny nambaran'ny mpanatanteraka GSMA: «tsy maintsy miatrika ny zava-misy isika fa ny sasany dia hanohy te-handray anjara lavitra«. Mazava ho azy, toy ny mahazatra, lavitra na mivantana, ny ekipan'ny Androidsis dia ho eo handrakotra ny andiany manaraka amin'ny Mobile World Congress.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Hisy ve ny MWC 2021? Toa izany, fa misy fetrany
Eo an-dàlana ny 875nm Snapdragon 5: nanomboka ny famokarana betsaka i Qualcomm